Diyaaradaha aan duuliyaha wadan ee dalka Maraykanka oo bartilmaadeedsadey saraakiil ka tirsan xarakada Shabaab oo ku suganaa gudaha dalka Somalia – idalenews.com
Diyaaradaha aan duuliyaha wadan ee dalka Maraykanka oo bartilmaadeedsadey saraakiil ka tirsan xarakada Shabaab oo ku suganaa gudaha dalka Somalia
Weerar ay qaaday diyaarad aan cidna wadin (Drone), oo la tuhunsan yahay in Mareyanka uu lee yahay ayaa lagu dilay laba hogaamiye oo Al-Shabaab ah, markii gaaarigii ay saarnaayeen lagu bartilmaameedsaday koonfurta Somalia, dadka deegaanka ayaa sidaas sheegay.
Diyaaradda Drone-ka ayaa gantaal ku dhufatay gaariga oo marayey degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe, oo 120 km dhinaca waqooyi kaga beegan Kismaayo.
Labada hogaamiye ayaa magacyadooda lagu sheegay Ibraahim Cali Cabdi kuna caan ahaa Adeer Cali iyo Warsame Baalle.
“Galabta ayaa waxaan maqalnay qarax gantaal oo culus, kadibna diyaarad Drone oo cirka kusii mirqeysa ayaan aragnay, waxaa la dilay laba hogaamiye oo Al-Shabaab ah” ayuu yiri Xasan Nuur oo ka mid ah dadka deegaanka.
“Waxaan indhaheyga saaray gaari nooca Suzuki ah, oo gubtay, waxaana goobta yimid xubno badan oo Al-Shabab ah, oo qaatay laba meyd. Waxa uu ahaa gantaal aad u culus oo ay Drone soo ridday” ayuu sii raaciyey Xasan oo la hadlay Caasimada Online.
“Gawaari badan ayaa marayey goobta, laakiin diyaaradda Drone-ka waxa ay beegsatay kan Suzuki-ga”.
Sidoo kale, dad kale oo deegaanka ah ayaa Caasimada Online u xaqiijiyey in weerar gantaal uu ka dhacay goobta.
Dhinaca kale saraakiil sare oo Mareykan ah ayaa xaqiijiyey weerarka, waxaana ay sheegeen in lagu bartilmaameedsaday laba hogaamiye oo miisaan culus ku dhex lahaa kooxda Al-Shabaab, inkasta oo aysan magacaabin.
Waxa ay yiraahdeen in mid ka mid ah uu ahaa khabiirkii ugu sareeyey ee miino isku xirka kooxda Al-Shabaab.
Dowladda Somalia weli kama aysan hadal arrintan. Sidoo kale kooxda Al-Shabaab ayaan si deg deg ah war looga heli karin.
Madaxweynaha Soomaaliya Mr Hassan Sheikh Maxamuud oo ka qeybgalaaya 90 guuradii aasaaskii Jamhuuriyada Turkiga
Safiirka Soomaaliya u qaabilsan midowga Yurub oo ka hadalay xaalka Tiicey iyo Afweyne.